Isatifikethi seCadastre esisisigxina kwi-CAD / GIS - Geofumadas
Isatifikethi seCadastral Certificate esisuka kwi-CAD / GIS
NgoJulayi, 2015 cadastre, Microstation-Bentley
Ukukhutshwa kwesatifikethi sepropati ngexesha elifanelekileyo kubalulekile ekuboneleleni ngeenkonzo kwiindawo zeCadastre, kunokusetyenziswa ngaphandle komgudu omkhulu, ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle nokunciphisa amaphutha abantu.
Indlela endala, xa sisebenza kunye noomasipala, xa umsebenzisi eceliwe isatifikethi kunye nesatifikethi se-cadastral, isiqingatha somsebenzi sihlolwe kunye nokulinganisa kwintsimi; Eminye yonke yayiza kusebenza kwimaphu kwaye ilwe nama-templates amanani ukuqinisekisa ukuba isatifikethi siyinyani kwi-data kwisiseko sedatha.
Kakade ke, ukuba imfuno iphantsi, iiyure ezichithwe yokulanda data, ukuzoba, kungqinisiswa nxamnye iimephu ezikhoyo, ukudala ibhokisi imiyalelo, imigama kunye scale template ukuzithethelela ngentsasa a Uchwepheshe kufana nje ukubukela iividiyo ku Youtube. Kodwa Cadastral ukuba ziyinxalenye kwiRejistri eNkulu, uya kufumana izicelo ezininzi imfuneko yomthetho ngexesha le ntetho, ukuba awunako ukuyenza ngesandla.
Lo ngumzekelo, ukuba sishicilele ukwenza ukuba kubonakale umzamo womntu weeyure ezimbalwa ezityalomali ekuphuhliseni isicelo esiqinisekisa ukuba isatifikethi sikhutshwe ngaphantsi kwemizuzwana ye-30.
Inkcazelo yezicwangciso igcinwa kwiziko le-Oracle Spatial database.
Imifanekiso ifakwa kwi-WMS ye-ArcGIS Server.
Isixhobo sokuxhamla abasetyenziswayo yiBentleyMap, isicelo seMicrostation kwimephu.
Njengoko uyakubona, imeko ekhoyo yilayisenisi yokuthengisa, kodwa xa usebenza namaziko karhulumente kufuneka usebenzise oko kukho, ukuba ungenalo igunya lokuhambisa umendo kwi-OpenSource. Abanye bangenza oku kunye nezinye izicelo, kwimeko yethu sifanele senze oko kwikho.
Idata eceliwe ngesicelo
I-Visual Basic for Aplicatiosn (VBA) yasetyenziselwa uphuhliso. Nangona isixhobo esasilenzile ngaphambili kwi-Microstation Geographics, okwenza ukuba utshintsho luchaze lula ezininzi zobububi obuye benziwa ngeefayile ze-DGN, zifuna ukusetyenziswa ngokukhawuleza kwezibonelelo ezitsha ezikhoyo.
Ifomu icela idatha kwi-deployment single:
Ikhowudi ye-cadastral, nge-mask ehambelana nesakhiwo. Kule meko, ikhowudi yesebe, ikhowudi yomasipala, icandelo kunye nenombolo yepropati.
Ivumela inketho ukuba isatifikethi silethe amagama abanikazi, ikhodi ye-cadastral okanye iinombolo zefama kwi-centroid yesalathisi.
Unokwenzelwa inketho yokuzisa umfanekiso wesiqalo kwisevisi yeWMS.
Unokukhetha ukuba ube nepropati eneenkcukacha ezipheleleyo.
Ngokumalunga nesilinganisi, isicelo sibheke ukulungelelaniswa kwipropati kunye nolunye uluhlu olongezelelweyo, ukuba ngenxa yezizathu ezithile luphuma lukhuni kakhulu unako ukunika inketho ejongene nesilinganiso esilandelayo kwizinto ze-125x.
Ekugqibeleni unentsimi yokongeza ukuqwalasela kunye nebha yenkqubela.
Emva kokuba inkqubo iqhutywe, isicelo senza isiqhelo esisetyenziswa ngumsebenzisi ukwenza ngesandla:
Idibanisa kwi-Oracle Spatial, kwaye isesha ipropati ngekhethi ekhethiweyo ekhethiweyo.
Thatha uluhlu lweenkcukacha zezinto (x, kunye nobuncinci kunye nobuninzi), oku kwongeza ipesenti ukwenzela ukuba loo propati ayize ilungiswe kwisakhelo, kwaye olo luhlu luzisa zonke iipropati ezidibeneyo yiloo quadrant.
Emva koko, isicelo sakha imodeli, senze iinqununu ebhokisini kunye nokubeka itemplate esele ine-modyuli kunye neempawu ezifakiwe.
Ukusuka kwiziko ledatha lithatha ulwazi lomnini, idilesi, indawo ebalwe, njl.
Inkonzo yewebhu isebenzisa ikhowudi yebhawudi / ikhowudi ye-QR.
Kwaye kwiphepha elilandelayo lenza izilungelelaniso, kunye nezikhokelo kunye nemizila njengoko umsebenzisi angayenza nge-CivilCAD okanye i-Civil3D.
Ingaba inkqubo ye-Microstation Geographics yayilula?
Ngaphandle kokungathandabuzeki, nangona ukulula kulula kubonakala kwezinye izinto ngaphandle kwesizukulwana sesatifikethi. Kodwa phakathi kwengeniso, kunokuthi ikhankanywe:
Uhlalutyo lwendawo lwangaphambili lwaluyingozi kakhulu, ekubeni iipropati ngoku zikwimeko yesithuba sendawo, umbuzo uphazamiseka ngakumbi; phambi kokuba kuqinisekiswe ukuba yeyiphi iimephu ezibonakalayo ezivela kummandla wesigcawu (enye enye i-DGN) yabandakanyeka imizuzwana eyimfuneko kunye nangaphezulu kweyodwa ingozi yokuguqula umda weemaphu kwaye ungahlaziyi inkcazo.
Kanye njengokuba ekuthiwa-umxholo mapping Geographics nakuma phambi iinkonzo umfanekiso, nto leyo kuyimfuneko ukubiza imifanekiso reference nokuba bathe baba format .ECW ekukhanyeni, ukuze yenziwe ukude enzima ngokucotha ukudluliswa. Ngoku nge-WMS, kuphela ukuthunyelwa kuthiwa njengenkonzo, kungekhona njengefayile yangokwenyama.
Emva koko ubukhulu beetekisi buyinzuzo, kuba ngaphambi kokuba kubhalwe itekethi njengengcaciso. Namhlanje iileyibhile ingasetyenziswa, ukwenzela ukudala imithetho yokudibanisa ubukhulu bepropati, kunye naluphina uhlobo olusisiseko lwefomathi ezinokuthi zichazwe kwi-XML ye-Feature Book, kungekhona kwithemplate.
Ividiyo iqhotyoshelweyo ibonisa indlela isicelo esenziwa ngayo.
Umngeni kufika ebhetele umdla liphulo siya ababaxhasayo ngokunxuseneyo: Yenza kuyo QGIS plugin hayi ngqo kwi Oracle kodwa nge WFS wakhonza kunye GeoServer, ndicinga nje kuphela yokusebenzisa ukusuka kwinkonzo kodwa ngenxa yokuba ingengabo bonke oomasipala banelayisenisi yeBentleyMap.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iimephu ze-25,000 emhlabeni wonke ziyafumaneka ukukhuphela
Post Next Ukhuthazo oluxabisekileyo kwi-gvSIG - I-Award ye-Europa ChallengeOkulandelayo "